Indikimba Yomcimbi Ibithi Abesifazane Bangabakhi Bomphakathi Bempela
Bezibuya kanje emcimbini i-Young Women in the Workplace.Click here for English version
UNks Qhamo Gumede, owayefunda e-UKZN nongungoti Wezenhlalakahle noKuthuthukisa Umphakathi nobheka abafundi ezindaweni zokuhlala e-Howard College naseSikoleni SobuDokotela, ubehlele umcimbi i-Young Women in the Workplace eMhlanga.
Lomcimbi ondikimba yawo ibithi Women are the Real Architects of Society, bekungowabantu besifazane bodwa.
Ezithamelini bekukhona ikakhulukazi abafundi a abangama-Residence Assistant (ama-RA) nama-Student Assistant (ama-SA) ezimpikweni ezimbili (eSikoleni SezobuDokotela nase-Howard College), lapho uGumede ebhekene khona nokuhlanganisa i-Residence Life Programme ethuthukisa bafundi ngokuphelele nokuqashwa kwebasebenzi bakhona kanjalo nokuqeqesha nokubheka abasebenzi abahlala eNyuvesi namalungu amaKomidi Ezokuhlala ngemva kokukhethwa abafundi.
I-Residence Life Programme ihlose ukuhlinzeka abafundi ngendawo yokuhlala ephephile, enempilo nebukekayo, okusiza umgomo wokufundisa weNyuvesi. Uhlelo lulonke lugxile ekuqhubekeni nokweseka ukufunda ngaphandle kwamagumbi okufunda nokweseka umsebenzi weSikhungo kanjalo nokuthuthuka kwezitshudeni kwezombusazwe nezenhlalo nezomnotho lapho abafundi behlala khona.
UGumede uthi ama-RA nama-SA, asebenza ngokuzikhandla ngokunamathela ezingeni le-Res Life Curriculum, kwenye inkathi ahlukunyezwa abafundi abangafuni ukuthobela umthetho wezindawo zokuhlala.
‘Inhloso yokuhlangana bekungukubonga izethameli nokuzinika izinto ezingazisebenzisa ukubhekana nezinselelo emabaleni aseNyuvesi nangaphandle kwakhona. Uma sibheka ucwaningo noma silalela izindaba zangempela, abantu besifazane bagilwa ngokuhlukunyezwa ngokobulili, ukubulawa kwabantu besifazane, ukuhlukunyezwa ngokocansi, ububhoklolo nemiholo engalingani neyabantu besilisa. Nakuba abantu abaningi behlukunyezwa ngabantu abathandana nabo kodwa imvamisa amadoda yiwona angabahlukumezi kuthi abantu besifazane kube yibona abahlukunyezwayo,’ kusho yena.
‘Izethameli emcimbini zinikwe amasu ezindlela ezisebenzayo zokubhekana nomnyombo wendluzula, okukhona kuzona umqondo emphakathini wokuthi abantu besilisa nabesifazane kufanele baziphathe kanjani nokwemukeleka kwendluzula.’
Ukubaluleka namandla omthandazo kugcizelelwe yisikhulumi esiqavile uMfu Makhosazane Nyawo wase-Durban Christian Centre Jesus Dome, othe ukungalingani ngokobulili kwenye inkathi kwenziwa ngabantu besifazane. ‘Sidinga ukuzilungisa thina! Abantu besifazane kudingeka ukuthi bazazise, bazi ukuthi kunezimpi okudingeka zilwiwe emsebenzini. Kudingeka ukuthi sishintshe ekubeni ngabantu abagilwayo sibe ngabanqobi; abantu abasabayo sibe ngabangesabi; abangenamandla sibe ngabanamandla; abayize sibe ngabahlonishwayo. Inhlonipho imqoka ngisho kuthiwa uneziqu zeMasitazi noma zobudokotela emkhakheni wakho uma ufisa ukuphila noma yikuphi, ikakhulukazi emsebenzini,’ kusho uNyawo.
Ukhuthaze izethameli ukuthi zidale imisebenzi kunokufuna umsebenzi, wathi kumqoka ukuthi zigomele iCOVID-19.
UNyawo uphethe inkulumo yakhe ngokukhulekela i-UKZN nawo wonke umuntu obesemcimbini.
UNyawo uncome uNks Nomvuselelo Mngadi noNks Melissa Sibanda ngokuba ngabaphathi bohlelo, ikakhulukazi njengoba bekungokoqala kubona bobabili.
‘Sibonga ama-Residence Life Officers asize ngokuhlela lomcimbi, ama-RA nama-SA ngokuba yizethameli ezinhle, uMnyango WezokuXhumana wase-UKZN ngokuthwebula umcimbi nesikhulumi esiqavile uNks Edista Ngubane wase-UKZN nesikhulumi sosuku uMfu Nyawo,’ kusho uGumede.
Izithombe: nguSiphosethu Dlamini